စပါးနညျးပွမျောရီစီယိုပိုခကျြတီနို၌ ယူနိုကျတကျသို့သှားရနျ အရံအစီစဉျရှိသညျဟု ယုံကွညျ နတေဲ့ ခြာလီနဈကိုးလတျ။ - Myanmar Football Arena
စပါးနညျးပွ မျောရီစီယိုပိုခကျြတီနိုဟာ အသငျးရလဒျဆိုးနပေမေယျ့ ငွိမျသကျနသေညျမှာ မွောကျလနျဒနျမှထှကျခှာပွီး အရံအစီစဉျရှိနသေညျ့သကျသဟေု Sky Sports ရုပျသံသုံးသပျသူ ခြာ လီနဈကိုးလတျက သုံးသပျလိုကျပါတယျ။ ခနျြပီယံလိဂျ၌ ဘိုငျယနျကို ၇-၂ ဖွငျ့ ရှူံးနိမျ့မှု၊ ပရီးမီးယား လိဂျ၌ ဘရိုကျတနျကို ၃-၀ ဖွငျ့ ရှူံးနိမျ့မှု၊ ဝကျဖို့ဒျနှငျ့သရကေမြှု ရလဒျဆိုးမြားကွောငျ့ ပိုခကျြတီနိုက ဖိအားအောကျရောကျရှိနပေါတယျ။ စပါးက ရကျစတားဘဲဂရိတျကို ၅-၀ ဖွငျ့အနိုငျရခဲ့ပမေယျ့ ဒီအ ပါတျပရီးမီးယားလိဂျ၌ ရှူံးပှဲမရှိသေးတဲ့ လီဗာပူးနှငျ့ ရငျဆိုငျကစားရမညျဖွဈသညျ။
ပှဲကွိုသုံးသပျခကျြအစီစဉျ၌ နဈကိုးလတျက ‘ဒါပှဲကွီးပှဲကောငျးပါပဲ။ တော့တငျဟမျက ခနျြပီ ယံလိဂျမှာ ပေါကျကှဲပွခဲ့တယျ။ ပိုခကျြတီနိုကို ယူနိုကျတကျနဲ့ ရီးရဲက လိုခငျြနတေော့ သူ့မှာအရံအစီ စဉျ ရှိပုံရပါတယျ။ ပိုငျရှငျနဲ့ အခွနေတေိုးတကျလာတာလညျး သူသိပါတယျ။ ကစားသမားတှလေညျး သူ့အတှကျ ညစာဧညျ့ခံခငျြနကွေတယျလေ။ တိုဘီအကျဒါဝီရယျလညျး နားနတေယျ။ သူတို့ခု လီဗာ ပူးနဲ့ ရငျဆိုငျကစားရတော့မယျ။ တိုဘီက သူ့စာခြုပျကို ဘာလို့ကုနျဆုံးအောငျ လုပျနတောလဲ? စပါး က ဝကျဖို့ဒျနဲ့ သရကေခြဲ့ပွီး ခနျြပီယံလိဂျမှာ ဂိုးပွတျနိုငျထားတော့ အနျဖီးမှာကစားဖို့ စိတျဓာတျတကျ ကွှနမှောပါ။ မနျခကျြနဲ့ပှဲက အနိုငျမရပမေယျ့ ဂနျြ့နဲပှဲမှာဂိုးသှငျးခဲ့တဲ့ မိုဟာမကျဆာလာ ပွနျပါမယျဆို တော့ သူတို့ပဲနိုငျပါလိမျ့မယျ။’ Sky Sports မှာ ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။
နဈကိုးလတျက လီဗာပူးဟာ စပါးကို ၃-၀ ဖွငျ့အနိုငျရမညျဟု ခနျ့မှနျးသှားခဲ့ပါတယျ။ ယာဂငျ ကလော့အသငျးက ခနျြပီယံမနျစီးတီးထကျ ၆မှတျ အသာရနပွေီး ၉ပှဲကစား၊ ၈ပှဲထိ အနိုငျရထားကာ ယူနိုကျတကျနှငျ့သာ သရကေထြားပါတယျ။ စပါးကမူ အဆငျ့၇နရော၌ ရပျတညျနပွေီး ခနျြပီယံလိဂျ ဝငျခှငျ့နရောထကျ ၅မှတျ လြော့နညျးလကျြရှိပါတယျ။
Ref; DailyStar / Tanslator ; ANT
စပါးနည်းပြမော်ရီစီယိုပိုချက်တီနို၌ ယူနိုက်တက်သို့သွားရန် အရံအစီစဉ်ရှိသည်ဟု ယုံကြည် နေတဲ့ ချာလီနစ်ကိုးလတ်။
စပါးနည်းပြ မော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုဟာ အသင်းရလဒ်ဆိုးနေပေမယ့် ငြိမ်သက်နေသည်မှာ မြောက်လန်ဒန်မှထွက်ခွာပြီး အရံအစီစဉ်ရှိနေသည့်သက်သေဟု Sky Sports ရုပ်သံသုံးသပ်သူ ချာ လီနစ်ကိုးလတ်က သုံးသပ်လိုက်ပါတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်၌ ဘိုင်ယန်ကို ၇-၂ ဖြင့် ရှူံးနိမ့်မှု၊ ပရီးမီးယား လိဂ်၌ ဘရိုက်တန်ကို ၃-၀ ဖြင့် ရှူံးနိမ့်မှု၊ ၀က်ဖို့ဒ်နှင့်သရေကျမှု ရလဒ်ဆိုးများကြောင့် ပိုချက်တီနိုက ဖိအားအောက်ရောက်ရှိနေပါတယ်။ စပါးက ရက်စတားဘဲဂရိတ်ကို ၅-၀ ဖြင့်အနိုင်ရခဲ့ပေမယ့် ဒီအ ပါတ်ပရီးမီးယားလိဂ်၌ ရှူံးပွဲမရှိသေးတဲ့ လီဗာပူးနှင့် ရင်ဆိုင်ကစားရမည်ဖြစ်သည်။
ပွဲကြိုသုံးသပ်ချက်အစီစဉ်၌ နစ်ကိုးလတ်က ‘ဒါပွဲကြီးပွဲကောင်းပါပဲ။ တော့တင်ဟမ်က ချန်ပီ ယံလိဂ်မှာ ပေါက်ကွဲပြခဲ့တယ်။ ပိုချက်တီနိုကို ယူနိုက်တက်နဲ့ ရီးရဲက လိုချင်နေတော့ သူ့မှာအရံအစီ စဉ် ရှိပုံရပါတယ်။ ပိုင်ရှင်နဲ့ အခြေနေတိုးတက်လာတာလည်း သူသိပါတယ်။ ကစားသမားတွေလည်း သူ့အတွက် ညစာဧည့်ခံချင်နေကြတယ်လေ။ တိုဘီအက်ဒါဝီရယ်လည်း နားနေတယ်။ သူတို့ခု လီဗာ ပူးနဲ့ ရင်ဆိုင်ကစားရတော့မယ်။ တိုဘီက သူ့စာချုပ်ကို ဘာလို့ကုန်ဆုံးအောင် လုပ်နေတာလဲ? စပါး က ၀က်ဖို့ဒ်နဲ့ သရေကျခဲ့ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ဂိုးပြတ်နိုင်ထားတော့ အန်ဖီးမှာကစားဖို့ စိတ်ဓာတ်တက် ကြွနေမှာပါ။ မန်ချက်နဲ့ပွဲက အနိုင်မရပေမယ့် ဂျန့်နဲပွဲမှာဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ မိုဟာမက်ဆာလာ ပြန်ပါမယ်ဆို တော့ သူတို့ပဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်။’ Sky Sports မှာ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
နစ်ကိုးလတ်က လီဗာပူးဟာ စပါးကို ၃-၀ ဖြင့်အနိုင်ရမည်ဟု ခန့်မှန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ယာဂင် ကလော့အသင်းက ချန်ပီယံမန်စီးတီးထက် ၆မှတ် အသာရနေပြီး ၉ပွဲကစား၊ ၈ပွဲထိ အနိုင်ရထားကာ ယူနိုက်တက်နှင့်သာ သရေကျထားပါတယ်။ စပါးကမူ အဆင့်၇နေရာ၌ ရပ်တည်နေပြီး ချန်ပီယံလိဂ် ၀င်ခွင့်နေရာထက် ၅မှတ် လျော့နည်းလျက်ရှိပါတယ်။